LokaChantha: “ဆွမ်းအလှူ”၊ “ဒွေသဟာယကဘိက္ခု” နှင့် “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ကြည့်ပါ”
“ဆွမ်းအလှူ”၊ “ဒွေသဟာယကဘိက္ခု” နှင့် “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ကြည့်ပါ”
၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက် စနေနေ့တွင် နယူးယောက်မြို့ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌ လွန်ခဲ့သော ၁၂-နှစ် (၂၅-မတ်-၂၀၀၀) က ဘဝတပါး ပြောင်းသွား ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဘုရား တန်ဆောင်း သိမ် ကျောင်း ရဟန်း ဒါယိကာမကြီး၊ အမေရိကန် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ ဝေယျာဝစ္စအဖွဲကို ဦးဆောင်သူ၊ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သော မည်သည့်အလှူမဆို သူမပါလျှင် မပြီးမပြည့်စုံ ‘နယူးယောက်ဝိသာခါ’ဟု ဆိုလောက်သူ ဒေါ်ငွေကြည်အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ ဦးသန်းမြင့်အား အမှူးထားကာ သားသမီး မြေး မြစ် မိသားစုများက မြတ်စွာဘုရားအား ပန်း ရေချမ်း ဆီမီး ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်း ပူဇော်ခြင်း၊ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်ပရိတ်သတ်များအား နေ့လယ်စာဖြင့် ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးခြင်း၊ သံဃာတော်များထံမှ သီလယူ၊ ပရိတ်တရားတော်များနှင့် တရားဓမ္မ နာကြားကြကာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကို အမျှပေးဝေကြ၏။
မွန်းလွဲ ၂ နာရီကျော်တွင် အပတ်စဉ်ပြုမြဲ တရားဘာဝနာ ရှုမှတ် ပွားများကြ၏။
မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ဆရာတော် အရှင်စက္ကိန္ဒက ဓမ္မပဒ၊ ယမကဝဂ်၊ ဂါထာ ၁၉-၂၀၊ ဒွေသဟာယကဘိက္ခုဝတ္ထုအကြောင်း သင်ကြား ပို့ချပေး၏။
ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ နေတော်မူသောအခါ ဂန္ထဓုရကို ဆောင်သော ရဟန်းတစ်ပါးသည် ဝိပဿနာဓုရကို ဆောင်သော ရဟန္တာကို ပြဿနာမေး၍ နှိပ်စက်မည် ရှိသည်။
ဘုရားရှင် ကြွတော်မူလာ၍ ကျမ်းဂန်တတ်သော ရဟန်းကို လေးပါးသော မဂ်တို့ဖြင့် ပြဿနာမေးတော်မူလေ၏။
ကျမ်းဂန်တတ်သော ရဟန်းသည် ထိခိုက်အောင် မဖြေနိုင်ရကား ရဟန္တာမထေရ်ကို မေးတော်မူ၏။
ရဟန္တာမထေရ်သည် မဂ်လေးပါးကို ပွားပြီးဖြစ်၍ လျင်မြန်စွာ ဖြေလေ၏။
ဘုရားရှင်သည် ကောင်းချီးပေး၍ - ချစ်သားတို့၊ ဂန္ထဓုရကို ဆောင်သော ရဟန်းသည် သူ၏ နွားကို အခစား ကျောင်းရသော သူနှင့် တူ၏။ ဝိပဿနာဓုရကို ဆောင်သော ရဟန်းကား နွားနို့ ထောပတ် ရသာမြတ်ကို မပြတ်စားရသော နွားရှင်နှင့် တူ၏ဟု မိန့်ပြီး၍ ...
၁၉။ ဗဟုမ္ပိ စေ သံဟိတ ဘာသမာနော၊
န တက္ကရော ဟောတိ နရော ပမတ္တော။
ဂေါပေါဝ ဂါဝေါ ဂဏယံ ပရေသံ၊
န ဘာဂဝါ သာမညဿ ဟောတိ။
၂၀။ အပ္ပမ္ပိ စေ သံဟိတ ဘာသမာနော၊
ဓမ္မဿ ဟောတိ အနုဓမ္မစာရီ။
ရာဂဉ္စ ဒေါသဉ္စ ပဟာယ မောဟံ၊
အနုပါဒိယာနော ဣဓဝါ ဟုရံ ဝါ၊
သ ဘာဂဝါ သာမညဿ ဟောတိ။ ဟူသော အခွဲနှင့်တကွ နှစ်ဂါထာကို ဟောတော်မူသည်။
ယောနရော - အကြင်သူသည်။
သံဟိတံ - အစီးအပွားရှိသော ပိဋကတ်သုံးပုံကို။
ဗဟုံ - များစွာ။
ဘာသမာနောပိ - သင်ကြား ပို့ချ ပြသ ဟောပြောသော်လည်း။
ပမတ္တော - သတိမေ့လျော့ ပေါ့တန်သည်ဖြစ်၍။
တက္ကရော - ထိုပြုသင့်သော အနိစ္စ စသည်ဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းကို ပြုသည်။
စေ နဟောတိ - အကယ်၍ မဖြစ်အံ့။
သောနရော - ထိုသူသည်။
ဂေါပေါ - အခစား နွားကျောင်းသားသည်။
ဂါဝေါ - ကျောင်းသမျှ နွားတို့ကို။
ဂဏယံ-ဂဏယန္တော - စေ့အောင် ရေတွက်၍။
ပရေသံ - နွားရှင်ဖြစ်သော သူတပါးတို့အား။
နိယျတေတိ ဣဝ - ဆောင်သွင်း အပ်နှင်းရသကဲ့သို့။
ပရေသံ - ကျင့်လိုသော ဆန္ဒရှိကြသော သူတော်ကောင်းတို့အား။
နိယျတေတိ - ဆောင်နှင်းပေးအပ်လိုက်ရသည် မည်၏။ (ထည့်လိုက်သည်။)
သော နရော - ထိုပြောဆိုခြင်းများ အကျင့်ပါးသောသူသည်။
သာမညဿ - မဂ်ဖိုလ်တည်းဟူသော ရဟန်းကျေးဇူး၏။
ဘာဂဝါ - အဖို့ရှိသည်။
န ဟောတိ - မဖြစ်။
သံဟိတံ - အစီးအပွားရှိသော ဘုရားစကားတော်ကို။
အပ္ပံ ဘာသမာနောပိ - အပြောအဆို နည်းသော်လည်း။
ဓမ္မဿ - ပရိယတ္တိတရားအား။
ဝါ - လောကုတ္တရာတရားအား။
အနုဓမ္မစာရီ - လျော်သော စတုပါရိသုဒ္ဓိသီလ ဓုတင်တေရသ စသော ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ကျင့်သည်။
စေဟောတိ - အကယ်၍ ဖြစ်အံ့။
ရာဂဉ္စ - ရာဂကိုလည်းကောင်း။
ဒေါသဉ္စ - ဒေါသကိုလည်းကောင်း။
မောဟဉ္စ - မောဟကိုလည်းကောင်း။
ပဟာယ - ပယ်၍။
သမ္မပ္ပဇာနော - ကောင်းစွာ အပြားအားဖြင့် သိသည်ဖြစ်၍။
သုဝိမုတ္တစိတ္တော - တဒင်္ဂဝိက္ခမ္ဘန သမုစ္ဆေဒ ပီတိပဿဒ္ဓိ နိဿရဏဝိမုတ္တိတို့ဖြင့် ကောင်းစွာ လွတ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍။
ဣဓဝါ - ဤပစ္စုပ္ပန်လောက အဇ္ဈတ္တဖြစ်သော ခန္ဓာ အာယတနဓာတ်၌လည်းကောင်း။
ဟုရံဝါ - တမလွန်လောက ဗာဟိရဖြစ်သော ခန္ဓာ အာယတန ဓာတ်၌လည်းကောင်း။
အနုပါဒိယာနော - ဒိဋ္ဌိ တဏှာဖြင့် ပြင်းစွာ စွဲလမ်းခြင်း မရှိသည်။
ဟောတိ - ဖြစ်၏။
သောနရော - ထိုပြောဆိုခြင်းနည်း အကျင့်သည်းသော သူသည်။
ဘာဂဝေါ - အဖို့ရှိသည်။
ပဟာန် (၅)မျိုး အရကောက်
‘ကာ’ ‘ရူ’ ‘မဂ်’ ‘ဖိုလ်’၊ ‘နိဗ္ဗာန်’ကို၊ ကောက်ဆို စဉ်တိုင်းသာ။
ပဟာန် အပြားမျိုး (၅)ပါး
တဒင်္ဂပဟာန် = ကာမကုသိုလ်တရားစုဖြင့် ပြုဆဲခဏ၌ ပယ်ခြင်း။
ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန် = မဟဂ္ဂုတ်ကုသိုလ်စုဖြင့် ခေါင်းပါးအောင် ပြုခြင်း၊ အချိန်အခိုက်အတန့် ပယ်ခြင်း။
သမုစ္ဆေဒပဟာန် = မဂ်ကုသိုလ်စုဖြင့် အပြတ် ပယ်ခြင်း။
ပဋိပဿဒ္ဓိပဟာန် = ဖိုလ်တရားစုဖြင့် ငြိမ်းအေးမှု ပြုခြင်း။
နိဿရဏပဟာန် = ပရိနိဗ္ဗာန်နဓာတ်ဖြင့် ဖြတ်တောက် ထွက်မြောက်သွားခြင်း။
မွန်းလွဲ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိ အဘိဓမ္မာသင်တန်းတွင် ဆရာတော် အရှင်ဝဏ္ဏိတက ပကိဏ်းပိုင်း၊ ဒွါရသင်္ဂဟနှင့် အာရမ္မဏသင်္ဂဟတို့ကို ရှင်းပြ သင်ကြားပေး၏။
ညနေ ၆ နာရီခွဲ လောကချမ်းသာ ဆည်းဆာတရားပွဲအဖြစ် အရှင်ပညာဇောတက “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ကြည့်ပါ”တရားတော်ကို ဓမ္မဒါနပြု ဟောကြားပြီး၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကို အမျှပေးဝေကြလေသည်။
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ကြည့်ပါ”တရားတော် ဆောင်ပုဒ်များ
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည့်၊ အမှားသိ၊ မြင်မိတတ်ပါစေ။
အမှားပြင်ဆင်၊ အမှန်ထင်၊ လိုအင်ပြည့်ဝစေ။
လိုအင်ပြည့်မှ၊ ချမ်းသာရ၊ ဘဝရကျိုးနပ်ပါစေ။
အသက်တွေကြီးလာပြီ၊ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ကြီးနေတုန်းပဲလား?
သွားတွေကျိုးလာပြီ၊ မာန်စွယ်တွေ မကျိုးသေးဘူးလား?
အရေတွေတွန့်လာပြီ၊ တဏှာအလိုဆန္ဒတွေ မတွန့်သေးဘူးလား?
အသားတွေလျော့လာပြီ၊ မကောင်းမှုအလုပ်တွေ မလျော့သေးဘူးလား?
မျက်စိတွေမှုန်လာပြီ၊ နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းကြောင်း မှုန်တုန်းပဲလား?
အောက်ကျနောက်ကျ၊ မဖြစ်ရ၊ ချီမ ဆွဲဆောင်သည်။
အလိုရှိရာ၊ မြတ်ချမ်းသာ၊ ကောင်းစွာ ပို့ဆောင်သည်။
ချမ်းသာလိုဆဲ၊ စိတ်စဉ်ထဲ၊ အမြဲမကွာ ဆောင်ထိုက်သည်။
တစ်ကြိမ်ဦးချ၊ ဘုရားကိုးကွယ်၊ ကမ္ဘာတစ်သိန်း တွက်ကိန်းရေဖွယ်။
အပါယဘေး လွတ်ကင်းလေတယ်၊ မြတ်ဘုရား၊ ကြိုးစား ရှိခိုးကြလေကွယ်။
၁၈၀-၁၈၁။ ရွှေအဆင်းနှင့်တူသော အဆင်းရှိတော်မူသော၊ မြတ်သော လှည်းမှူးသဖွယ် ဖြစ်၍ လူတို့ထက် မြတ်သော၊ နိဗ္ဗာန်သို့ ပို့ဆောင်တတ်သော၊ မယဉ်ကျေးသောသူတို့ကို ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမတတ်သော၊ တာဒိဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ မြတ်သောအယူ၊ မြတ်သောပညာရှိတော်မူသော ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရားကို အိမ်ဈေးတို့၏အကြား လမ်းခရီး၌ ကြွသွားတော်မူစဉ် ဖူးမြင်ရသောကြောင့် ငါသည် ကြည်ညို ဝမ်းမြောက်လျက် လက်အုပ်တစ်ကြိမ် ချီမိုး ရှိခိုးခြင်းကို ပြု၏။
၁၈၂။ ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ ကိုးဆယ့်တစ်ကမ္ဘာအထက်၌ လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးခဲ့သောအခါမှ စ၍ အပါယ်လေးပါး လားရသည်ကို မသိစဖူးပေ။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးရခြင်း၏ အကျိုးပေတည်း။
၁၈၃။ လေးပါးသော ပဋိသမ္ဘိဒါတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ရှစ်ပါးသော ဤဝိမောက္ခတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ခြောက်ပါးသော အဘိညာဉ်တို့ကိုလည်းကောင်း မျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီ။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမတော်ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးပြီးပါပြီ။
ဤသို့လျှင် အသျှင်ဧကအဉ္ဇလိကမထေရ်သည် ဤဂါထာတို့ကို မိန့်ဆိုတော်မူ၏။
(ထေရာပဒါန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်၊ ပဌမတွဲ မှ)
(၁) အတ္ထပဋိသမ္ဘိဒါ = အကျိုးကို သိသောဉာဏ်
(၂) ဓမ္မပဋိသမ္ဘိဒါ = အကြောင်းကို သိသောဉာဏ်
(၃) နိရုတ္တိပဋိသမ္ဘိဒါ = သဒ္ဒါကို သိတတ်သောဉာဏ်
(၄) ပဋိဘာနပဋိသမ္ဘိဒါ = သစ္စာ ၄-ပါးကို ထိုးထွင်း၍ သိသောဉာဏ်
အဘိ = ထူးခြားသော၊ မြင့်မြတ်သော
ဉာဏ = ဉာဏ်
(၁) ဒိဗ္ဗစက္ခု = နတ်မျက်စိကဲ့သို့ သိမြင်နိုင်ခြင်း။
(၂) ဒိဗ္ဗသောတ = နတ်တို့၏နားကဲ့သို့ ကြားနိုင်ခြင်း။
(၃) ဣဒ္ဓိဝိဓ = အမျိုးမျိုး ဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်း။
(၄) စေတောပရိယ = သူတပါး၏ စိတ်အကြံကို သိနိုင်ခြင်း။
(၅) ပုဗ္ဗေနိဝါသ = မိမိဖြစ်ခဲ့ဖူးသော ဘဝတို့ကို သိနိုင်ခြင်း။
(၆) အသဝက္ခယ = အာသဝေါတရားလေးပါးတို့ ကုန်ခန်းခြင်း။
(၁) ရူပဈာန်နှင့် ပြည့်စုံသောသူသည် ရုပ်တို့ကို ရှုနေ၏။
(၂) မိမိသန္တာန်၌ ရုပ်ကို အမှတ်မပြုမူ၍ ပြင်ပ၌ ရုပ်တို့ကို ရှုနေ၏။
(၃) တင့်တယ်၏ဟူ၍သာလျှင် နှလုံးသွင်းနေ၏။
(၄) အာကာသာနဉ္စညာယတနဈာန်သို့ ရောက်၍ နေ၏။
(၅) ဝိညာဏဉ္စယတနဈာန်သို့ ရောက်၍ နေ၏။
(၆) အာကိဉ္စညာယတနဈာန်သို့ ရောက်၍ နေ၏။
(၇) နေဝသညာနာသညာယတနဈာန်သို့ ရောက်၍ နေ၏။
(၈) နိရောဓသမာပတ်သို့ ရောက်၍ နေ၏။
လောကဓံတရား ရှစ်ပါးတို့တွင် အကောင်းလေးပါးနှင့် တွေ့၍ ဝမ်းသာအားရမှု မရှိ။ အဆိုးလေးပါးနှင့် တွေ့လျှင်လည်း ဝမ်းနည်း ကြေကွဲမှု မရှိ။ ပကတိ တူမျှသော စိတ်တော်ရှိခြင်း ဂုဏ်။
(၁) ကာမာသဝ = ကာမဂုဏ်၌ ကြံစည်တတ်ခြင်း။
(၂) ဘဝါသဝ = ဘဝ၌ တွေဝေခြင်း။
(၃) ဒိဋ္ဌာသဝ = အယူဝါဒ၌ တွေဝေခြင်း။
(၄) အဝိဇ္ဇာသဝ = မိုက်မဲခြင်း။
(၁) လာဘ = လာဘ်များခြင်း။
(၂) အလာဘ = လာဘ်နည်းခြင်း။
(၃) ယသ = အခြံအရံများခြင်း။
(၄) အယသ = အခြံအရံနည်းခြင်း။
(၅) နိန္ဒာ = ကဲ့ရဲ့ခြင်း။
(၆) ပသံသာ = ချီးမွမ်းခြင်း။
(၇) သုခ = ချမ်းသာခြင်း။
(၈) ဒုက္ခ = ဆင်းရဲခြင်း။
သင်္ဂဇာဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဓမ္မပဒနိဿယ မြန်မာပြန်
ထေရာပဒါန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်၊ ပဌမတွဲ
Posted by LokaChantha at 5:32 PM
ဓမ္မာရုံဟောင်းနှင့် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆက်သွယ် (မတ် ၂၇...
“ဆွမ်းအလှူ”၊ “ဒွေသဟာယကဘိက္ခု” နှင့် “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသ...
“သုမနဒေဝီ”၊ “စိတ်၏တံခါးပေါက်များ” နှင့် “တရားဦး”
“အရှင်ဒေဝဒတ်”၊ “စိတ်၏ကိစ္စများ”နှင့် “ချမ်းသာရရန် မ...
၂၆ ကြိမ်မြောက် အေဘီဘီအေ ထမနဲပွဲတော် (၄-မတ်-၁၂)
ကောက်ကျစ်သောကြောင့် ရွှေခွက်ရှုံးသော ရွဲကုန်သည်အကြော...
၂၆-ကြိမ်မြောက် အေဘီဘီအေ ထမနဲပွဲ ဓာတ်ပုံများ